Golaha Amaanka oo si adag uga horyimid waqti kordhinta Farmaajo, digniina u diray - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Golaha Amaanka oo si adag uga horyimid waqti kordhinta Farmaajo, digniina u...
Golaha Amaanka oo si adag uga horyimid waqti kordhinta Farmaajo, digniina u diray
Shir gaar ah oo ay isugu yimaadeen wadamada Xubnaha ka ah Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si buuxda uga horyimid waqti kodhinta uu baarlamaanka Federaalka u sameeystay Farmaajo.
Golaha ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii Afisyooni ee u dhexeeyay Dowladda Federalka Soomaaliya iyo maamul goboleeyada, kaddib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Dhanka kale ma jirin bayaan guud oo ka soo baxay shirka Golaha Ammaanka, maadaama shirkan ahaa mid albaabadu u xaranyihiin, hase yeeshee waddamada qaar ayaa soo bandhigay qodobadii shirkaas looga hadlay iyo waxyaabihii ay ka yiraahdeen xaaladda cakiran ee Soomaaliya.
“Dariiqa kaliya ee u furan Soomaalida waa in dib loo billaabo wadahadalladii doorashada ee ku saleysanaa heshiiskii 17 September” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxaay ergada Norway ee Golaha Ammaanka. Waddanka Irealand oo isna ka mid ah 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa diray farriin taa la mid ah, waxaana qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada dalkaas loogu baaqay madaxda Soomaalida inay dib u soo nooleeyaan wadahadalkiii doorashada, lana qabto doorasho loo dhanyahay oo wakhtigeeda ku dhacda.
xubnaha shirka ka qaybgalay ayaa sheegay in ayan marnaba taageeri doonin waqti kordhin. Waxa ay shegeen in ayan In Dowladda Federalka iyo Maamul Goboleeydu ku laabtaan madasha wadahadalka, in la hirgaliyo heshiiskii 17-kii September iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhabo, in caqabadaha siyaasaddu ay dhiirragalinayaan Al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah iyo inay soo dhaweynayaan dadaallada midowga Africa.
Shirkaan ayaa ku soo aaaday xilli uu sii xoogeysanayo is-mariwaaga siyaasadda Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya aysan weli ka tanaasulin muddo kororsigii golaha shacabku sameeyay 12-kii bishan April, kaas oo ay ugu yeereen jiheynta doorashooyinka dalka.
Wadamada qaar ayaa digniin adag u diray Farmaajo iyaga oo ku goodiyay in uu caawaaqib xumo uu kala kulmi doono hadii uu ku adkeeysto waqti kordhinta.